Cunto Cunnadeed Pumpkin Pie (No-Fail) - Sugar Geek Show - Pies Iyo Tarts
Cunto Caan ah oo loo yaqaan 'Pumpkin Pie'
Baaskiilada caadiga ah ee bocorka leh xawaashyada diiran, maqaarka dufanka leh, iyo qolof buskud leh
Cuntadan macaan ee bocorka waa mid jilicsan oo kareem leh oo had iyo jeer ku dhufo ciidaha. Lagu sameeyay maaddooyin fudud iyo farsamooyin qadiimi ah oo loogu talagalay roodhida fiican. Ma jiro jiingado gubtay, sagxado jilicsan ma jiraan, dusha dillaac ma leh. Waxa kaliya ee aad ubaahantahay waa bocor shiidan, kareem culus, bur, subag, ukumo, iyo dhir udgoon.
Marabtaa inaad waxbadan kabarato aasaasiga samaynta keega? Daawo casharkeyga qolofkeyga pie
Talooyin loogu talagalay keega ugu fiican bocorka
Pumpkin pie ayaa caan ku ah helitaanka qolof qolof leh, qolof aan dubnayn. Tani waa sababta oo ah dareeraha sare ee buuxinta bocorka. Waxay kuusocotaa qolofta waxayna kahortagtaa dubista. Marka sidee looga fogaan karaa sagxadda hoose? Waa inaad isticmaashaa qolof loo sameeyay dib u celinta dareerayaasha. Waxaan isticmaalaa tayda mealy pie cajiinka cajiinka oo ku habboon samaynta qolof dhadhan fiican leh, qasan oo aan lahayn sagxad hoose sida aad ku arki karto sawirka kore.
Cajiinka Mealy pie wuxuu sifiican ugu shaqeeyaa jiiska leh dareere buuxiya sida baaska bocorka.
Ka dhig buskudka dherigaaga buuxintiisa oo u daa inuu qaboojiyo
Samee cajiinkaaga kaluunka mealy oo u daa qabow illaa hal saac ama habeen ah
U oggolow cajiinkaagu inuu kululeeyo heerkulka qolka illaa aad awood u leedahay inaad ku soo rogto biinkaaga duudduuban
Caji cajiinkaaga u dhig 1/8 ″ dhumucdiisana geli digsigaaga digsiga
Iska yaree cajiinka xad-dhaafka ah laakiin ka tag qiyaastii 1/4 dough cajiinka xad-dhaafka ah illaa inta laga gaarayo si loogu xisaabtamo yaraanshaha
Farji geesaha si aad u qurxiso ama isticmaal fargeeto si aad u qurxiso
Qabooji cajiinka roodhiga ah 20 daqiiqo kahor buuxinta
Ku caday ukunta maydhista si aad kor ugu qaaddo qolof dhalaalaysa oo bunni ah
Ku buuxi qoloftaada buskudka buuxinta keegga oo dub ilaa qolofta jiiska ay ka baxeyso dhinacyada geesaha digsiga
Soo ururi maaddooyinkaaga
isku qas qasin
qabow hal saac ama habeen ah
cajiinka ha u kululaado xoogaa heerkulka qolka ka dibna ha u soo baxo
jar geesaha oo ku afuufo farahaaga
samee bocorkaaga buskudka buuxintiisa
buuxi qolofkaaga ilaa korka
dubo ilaa xarunta ay gaarto 170ºF
Sideed u buuxisaa qolof buskud ah buskud la'aan?
Sida ugufiican ee loo buuxiyo qolofta buskudka bocorka waa in la dhigaa qolof rooga ah ee la qaboojiyey xaashida dubista. Ka dib buuxi kala-badh buuxintaada. Xaashida ku wareeji foornada kululeysa oo dhammeystir buuxinta. Sidaas ayaa ah waxa kaliya ee ay tahay inaad sameyso waa inaad ku duubtaa weelka foornada fursadahaaga wax ku daadintaana ay yar yihiin.
sida loogu qurxiyo keeg ubaxyo dhab ah
Hubso inaad buuxisid qolofkaaga illaa iyo xagga kore, buuxinta digaagga oo dhan kama kacayso.
sida loo sameeyo dhadhan fiican
Ma u baahan tahay inaad indho-la-dubato qolof buskud ah?
Haddii aad isticmaaleysid cajiinka kalluunka mealy, uma baahnid inaad indho beesho dubista (qolofta ka hor dub). Kaliya iska hubi inaad dubto keegga muddo dheer oo ku filan in qolofku ka yaraanayo cidhifka saxanka digsiga. Taasi waa sidaad ku ogtahay inay dubtay dubista. Haddii qolofkaagu dhaqso u bunni noqdo, ku dheji raashinka foornada labaad dusha dusha sare ee foornada dusha sare leh foornada leh aluminium aluminium ah si looga hortago bunni badan.
Ha saarin aluminiumka aluminiumka dusha qolofta ama waad dhaawici kartaa buuxintaada keegga.
Haddii aad rabto inaad horay u dubto qolofkaaga si aad uga fogaato inaad si xad dhaaf ah u karsato buuxinta buskudkaaga bocorka, kaliya par-ku dub (nus-dub) si qolofku uusan uga dhaafin bunni buuxinta.
Soo rog cajiinkaaga cajiinka meyla oo ku rid digsigaaga digsiga
Iska yaree qolofta xad dhaafka ah laakiin kaga tag 1/4 ″ cajiinka hareeraha banaanka si aad ugu yaraato
Qabooji 20 daqiiqo
Dhig xoogaa yar oo xaashi ah xaashi cajiinka ah oo buuxi miisaanka cowska ama digirta qalalan illaa iyo xagga sare.
Dub ilaa 15 daqiiqo ka dibna si taxaddar leh uga saar miisaanka. Dub ilaa 5 daqiiqo oo dheeri ah.
Ku buuxi buuxinta buskudka bocorka la kariyey iyo dubi. Xusuusnow, qolof keeg ah oo la dubay ayaa ka dufan doona qolof buskud ah.
Sideed uga fogaan kartaa sagxadda hoose ee buskudkaaga bocorka ah?
Tallaabada koowaad waxay isticmaaleysaa cajiinka saxda ah (mealy cajiinka). Tilaabada labaad waa inaad hubiso inaadan duban karin keegaaga. Dub ilaa qolofku ka fogeeyo dhinacyada digsiga keega. Tani waxay ka dhigan tahay in bartamaha cajiinka ay dubtay oo ay qandaraas ku qaadatay.
Sidee looga ilaaliyaa digaagga ducunka inuu dillaaco
Baaskiilka Pumpkin waa in lagu kariyaa heerkul aad u hooseeya (375ºF) si looga fogaado buuxinta inay aad u kululaato, sii ballaadho oo u dillaacdo Dubista heerkulka sare ama dubista badan waxay sidoo kale sababi kartaa keega bocorka inuu helo biyo iyo dildilaac.
sida loo sameeyo muraayad keega marmarka ah
Si looga fogaado dildilaaca, dhig keegaaga sariirta ugu hooseysa ee suurta galka ah foornada horay loo kululeeyay si qolofku uu dhaqso u dego. Dubo ilaa inta buuxinta la dhigayo geesaha laakiin wali wax yar oo jiggly ah oo ku taal bartamaha iyo marka qolofka ka yaraado geesaha. Waad qaadan kartaa heerkulka buuxinta baastada. Waxaa si buuxda loogu kariyey 175ºF.
Waxa kale oo laga yaabaa inaad xiisaynayso cuntooyinkan
Kareemka La Xasiliyay
Baararka Cheesecake Pumpkin
Bocorka Guriga Lagu Sameeyo Puree
Sida loo sameeyo buskud qafiif ah oo leh xarun kareem leh, dildilaac lahayn, iyo qolof jilicsan. Waqtiga Diyaarinta:shan iyo toban daqiiqado Waqtiga karinta:Afar. Shan daqiiqado waqtiga nasashada:1 saac Wadarta Waqtiga:laba saacado Kalori:1176kcal
▢12 ounces (284 g) bocor daahir ma aha buuxinta baayga bocorka
▢1 qaaddo shaaha qorfe
▢1/4 qaaddo shaaha (227 g) lowska
▢1/4 qaaddo shaaha (85 g) sinjibiil
▢1/8 qaaddo shaaha toon ah
▢5 ounces (141.75 g) sonkorta buniga ah
▢3 weyn ukunta
▢10 ounces (283.5 g) kareem culus
Mealy Pie cajiinka
▢12 ounces (340 g) bur dhan ujeedo leh
▢1/4 qaaddo shaaha cusbo
▢6 ounces (170 g) subag qabow daadiyey
▢1 weyn ukunta qabow
▢1 ounce (28 g) biyaha barafka
▢1 weyn ukunta
▢1 Miisaska cuntada biyo
▢9 'saxan cagta
Kuleyli foornadaada ilaa 375ºF
Wixii buuxinta bocorka
Isku qas ukunta, kareemka culus iyo bocorka shiidan ilaa inta la isku darayo
Kudar dhir udgoon, milix iyo sonkor bunni ah oo isku dar
Dhinac dhig inta aad cajiinka diyaarinayso
Wixii cajiinka mealy
Isku dar burka iyo milixda ku jirta baaqulika mashiinkaaga istaaga oo ku lifaaqan lifaaqa suufka.
Ku dar subaggaaga qabow iskuna walaaq hoose illaa inta isku darku u eg yahay ciida cagaaran
Ukunta iyo biyaha ku dar oo isku dar si hoose ilaa ay cajiinka isku dhegaan
Is fidin oo ku duub duub balaastig ah. U ogolow cajiinka inuu qaboojiyo 20 daqiiqo ama habeen kahor intaadan isticmaalin. U daa diirimaad ilaa 20 daqiiqo ama ilaa la huwinayo laakiin wali adkeyso ka hor intaadan is bixin.
Isu rog cajiinkaaga cajiinka ah 1/4 'dhumucdiisana dhig saxankaaga saxanka ah. Ka tag 1/4 'cajiinka dheeriga ah illaa intaad ka goynaysid xad-dhaafka xisaabtanka yaraanshaha
Farjar cidhifyada si aad ugu ekaatid wax qurxin
Qabooji cajiinka 20 daqiiqo kahor buuxinta
Dhig qolof digaag barafaysan digsi xaashi ah. Ukunta dhaq geesaha.
Buuxi qolofta digaagga kalabadh. Digsiga dhig foornada la kariyey oo buuxi inta ka hartay buuxinta.
Dub ilaa 35-45 daqiiqo ilaa qolofta ay ka yaraato cidhifyada saxanka saxanka.
Qabow ka hor intaadan u adeegin kareemka la shiiday. Ku keydi qaboojiyaha.
Isku xoq hal ukun iyo 1 qaado oo biyo ah ka dib ku cadayo qolofka si aad kor ugu qaaddo qolof bunni dahab ah oo dhalaalaya
U adeegida:0.08g|Kalori:1176kcal(59%)|Kaarboohaydraytyada:238g(79%)|Protein:36g(72%)|Dufan:6g(9%)|Dufan Dufan:1g(5%)|Kalastarol:105mg(35%)|Sodium:1713mg(71%)|Kaliumperyamper:373mg(kow iyo toban%)|Fiber:8g(32%)|Sonkor:1g(1%)|Vitamin A:153IU(3%)|Kaalshiyam:63mg(6%)|Bir:shan iyo tobanmg(83%)
Talooyinka Bandhigga Aroosyada ee Ganacsatada iyo Qurxinta Keega
Casaanka Casriga ah ee Casriga ah
Recipe Cake Roll Cake
sida loo sameeyo video liin curd ah
sida loo akhriyo miisaanka jikada ee dhijitaalka ah
sida loo sameeyo keeg qaanso roobeed oo lakab ah
Cunto dhalaal dhalaal ah
Cunnooyinka dhaldhalaalka ah ee la cuni karo ayaa jiray in muddo ah waxayna ku kala duwan yihiin xagga farsamada laakiin waxaan u maleynayaa in kani yahay kan ugu fudud uguna guusha badan
Sidee loo sameeyaa qaboojiyaha farmaajada ee kareemka aadka u kareemka leh, dhadhamka ah kuna habboon keega qabow iyo keega! Cunnooyinka ugu fiican ee qaboojiyaha barafka waligood!
Shaqaalaha Wizard ee Socda
Sida loo sameeyo shaqaale saaxir ONWARD ah jawharad dhalaalaya isomalt. Cashar barasho oo bilaash ah oo loogu dabaaldegayo filimka cusub ee 'ONWARD'!